China TYS165-3HW Bulldozer Emeputa na Nweta | Shehwa
TYS165-3HW bulldozer bụ 165 horsepower track-type dozer na hydraulic kpọmkwem draịva, ọkara-isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik na-enyere aka na-arụ ọrụ, ọkwọ ụgbọ mmiri na-anya ụgbọ mmiri na njikwa na-achịkwa na njikwa. A na-eji Bulldozer TYS165-3HW mara ọkwa nke ọma, mepere emepe ...
TYS165-3HW bulldozer bụ 165 horsepower track-type dozer na hydraulic kpọmkwem draịva, ọkara-isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik na-enyere aka na-arụ ọrụ, ọkwọ ụgbọ mmiri na-anya ụgbọ mmiri na njikwa na-achịkwa na njikwa.
A na-ejikarị bulldozer TYS165-3HW site na arụmọrụ dị elu, oghere na-emeghe, nhazi kachasị, arụmọrụ dị mfe na ọrụ yana ọnụ ala na ntụkwasị obi niile.
Nrụgide nke ala (gụnyere ripper) (KPa): 41.1
Ihe nlele anya (mm): 2300
Max. Igwu ala omimi (mm): 400
:Dị: Egwu ahụ bụ ọdịdị triangle.
N'iru ipigide: Otutu-diski mmanụ ike metallurgy diski abịakọrọ site mmiri. haịdrọlik ejikwara.
TS165-2 Multi-ọrụ Bulldozer